ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
← နှစ်မကူးခင် ရေးတဲ့စာအနုတ် ၁ ၊ အပေါင်း ၁ +++ →
7 comments on “၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း”	အိမ် says:	January 13, 2010 at 5:11 am	အင်း…. အချိန်တန်လို့ခွဲခွာသွားရပေမဲ့ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေက ရွာမှာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း… သူ့ကံကုန်လို့ ၊ ဖြစ်ချိန်တန်လို့၊ သေနှစ်စေ့လို့၊ လို့သာဖြေတွေးလိုက်ပါတော့သာ….. ။
flowerpoem says:	January 13, 2010 at 2:05 pm	စိတ်မကောင်းပါဘူး ကို ZOX
နေ့အိပ်မက် says:	January 14, 2010 at 5:36 pm	စိတ်မကောင်းစရာ 🙁 ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
ဖိုးဂျယ် says:	January 14, 2010 at 7:49 pm	ဒါကြောင့် အလုပ်ရှုပ်နေတာလား အကိုရေ
မင်းဒင် says:	January 17, 2010 at 12:55 pm	ကျွန်တော် အမိမြန်မာ နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်တဲ့ နေ့မှာပဲ သတင်းဆိုး တစ်ခုကို ကြားခဲ့ရ ပါတယ်။
Black Dream says:	February 22, 2010 at 1:35 am	ရင်ဘတ်ကို စောင့်အကန်ခံရတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ ကိုယ့်ညီရေ..။ 🙁
kom says:	March 12, 2010 at 9:23 pm	ကျောက်ကပ်ပျက်ရင်မကြာခဏကျောက်ကပ်ဆေးရတယ။်တစ်ခါဆေးလိုက်ရုံနဲ့ကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး ဆေးပြီးမကြာခင် ပြန်ဆေးရတာဘဲ။ ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာ ခဏဘဲ။ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တာဘဲ။